Amatye asezantsi e-Aquarium | Ngeentlanzi
Amatye asezantsi e-Aquarium
Ukuba unomdla wokuseka i-aquarium ekhayeni lakho, eofisini yakho, okanye kwenye indawo, kubalulekile ukuba uyithathele ingqalelo amatye ekhethiweyo ukuba uya kubeka emazantsi echibi. Abantu abaninzi banokucinga ukuba la matye anomsebenzi wokuhombisa okanye wokuhombisa, kodwa inyani kukuba banomsebenzi obaluleke kakhulu kwizilwanyana zethu ezincinci.
Kubalulekile ukuba ugcine engqondweni ukuba iintlanzi eziya kuhlala kwitanki lethu leentlanzi, ziya kufuna izinto ezithile ezilinganayo okanye ezifana ncam neemeko abaqhelene nazo kwindawo yabo yendalo, ukuze, ngale ndlela, babuphucule ubomi babo ngokwesiqhelo. Kungenxa yesi sizathu la matye ezalisekisa umsebenzi osisiseko, kuba ziya kusinceda silingise iimeko zendalo ezihlala kuzo ezi zilwanyana.
AmatyeAyizukunceda kuphela i-aquarium yethu ukuba ibonakale intle kwaye inemibala, kodwa ziya kunceda izilwanyana zethu ukuba zizimele xa zibona nayiphi na ingozi, okanye ukuba zoyikiswa yintshukumo yangaphandle okanye ingxolo. Kwimeko apho uthatha isigqibo sokungazibandakanyi, gcina engqondweni ukuba izilwanyana zakho ziya kuba noxinzelelo olukhulu, olunokuthi lube nefuthe elibi kubomi babo, zinokugula, kwaye zife.
Kubalulekile ukuba amatye esiwasebenzisa emazantsi e-aquarium yethu, Sizithenga kwivenkile yezilwanyana zasekhaya okanye nakweyiphi na ivenkile ekhethekileyo, kuba ukuba wazisa naliphi na ilitye oqokelele elwandle okanye emlanjeni, ungazisa iintsholongwane okanye izinto ezinobungozi kwimpilo yezilwanyana zethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Amatye asezantsi e-Aquarium
Ukunyamekela i-llama angelfish